Ikhoyili yentsimbi engenasici kunye nomtya kunye nabavelisi bephepha - i-coil yentsimbi engenasici kunye nomtya kunye nephepha ababoneleli kunye nefektri
Iphepha le-316 engenasici nge-2B umphezulu
Iphepha le-316 lesinyithi elingenasici linomphezulu ogudileyo, ubungqongqo obuphezulu, ubungqongqo kunye namandla oomatshini, kwaye ayimelani nokubola yi-asidi, igesi ene-alkaline, isisombululo kunye neminye imithombo yeendaba. Yintsimbi ye-alloy ekungekho lula ukurusa, kodwa ayisiyi rusi kwaphela. Iphepha lesinyithi elingenasici libhekisa kwiphepha lesinyithi elinganyangekiyo kumhlwa wezinto ezibuthathaka ezifana nomoya, umphunga kunye namanzi.
Okwangoku, indlela yokuhlela esetyenziswa ngokuxhaphakileyo isekwe kwiimpawu zokwakheka kwamashiti esinyithi, ukubonakaliswa kweekhemikhali kweempawu zentsimbi kunye nokudibana kwazo. Ngokubanzi yahlulwe yentsimbi yemartensitic sheet, ifriti yentsimbi, iphepha le-austenitic, i-duplex yentsimbi engenasici kunye nemvula eyenza ukuba lukhuni lwensimbi engenasici, okanye yahlulwe yintsimbi ye-chromium kunye ne-nickel sheet.
Umtya ongenagwele we-304 nge-Hairline Surface
304 Umcu wentsimbi engenasici uveliswa kuqala kwiizilebhu, emva koko zibekwa kwinkqubo yokuguqula kusetyenziswa ilitye lokusila le-Z, eliguqula isileyi sibe ngumcu ngaphambi kokuqhubeka kokuqengqeleka. Umcu weentsimbi ezingenasici kukukhulisa iphepha le-stainless steel stainless. Iveliswa ikakhulu ukuhlangabezana neemfuno zokuveliswa kwemveliso zentsimbi ezahlukeneyo okanye iimveliso zoomatshini kumasebe ohlukeneyo emizi mveliso.